Labo wiil oo walaalo ah oo soomaali ah ayaa ladilay, USA - RBC – Axadle
Labo wiil oo walaalo ah oo soomaali ah ayaa ladilay, USA – RBC
Kansas City (Axadle) – Nin Soomaali ah ayaa labo wiil oo walaalo ah ku dilay habeenkii Jimcaha magaalada Kansas City, Missouri, markii ay ka soo noqdeen salaadii subax, booliska ayaa sheegay.
Qoysaska iyo booliska ayaa ku kala sheegay labada wiil ee la dilay in lagu kala magacaabi jiray C / waaxid C / casiis oo 16 jir ahaa iyo C / raxmaan C / casiis oo 14 jir ahaa.
Booliska ayaa looga yeeray aag u dhow Bariga 8-da Street iyo Wadooyinka Olive Street, oo hada 11-ka habeenimo ee Jimcaha, waxaana lagu wargaliyay toogashada, sida uu sheegay Captain-ka Booliska Magaalada Kansas. Dave Jackson.
Markii ay yimaadeen, waxay ka heleen meydadka labada wiil rasaas fara badan oo ku taal bannaanka gurigooda.
Booliska ayaa sheegay in eedeysanaha uu yahay Hanad C / casiis, oo 25 jir ah. Nin hubeysan oo la rumeysan yahay inuu yahay Hanad ayaa lagu dilay is rasaaseyn ay la galeen booliska habeenkii Sabtida, laakiin booliska wali ma aysan shaacin magaciisa waxayna sheegeen inay dib ka soo sheegi doonaan.
Labada wiilba waxay jeclaayeen jaaliyadaha Soomaalida, salaadoodu waxay ka timi masaajidka Quraanka xaafidul tukin Al-Taqwa wuxuu ku yaallay Kansas City.
Qoyska dhibanaha ayaa sheegay in Hanad uu sidoo kale u hanjabay xubnaha kale ee qoyska. Waxay intaas ku dareen inay hadda u dhuumanayaan cabsi ay ka qabaan noloshooda, maxaa yeelay weli lama caddeyn in ninka ay dileen booliska uu ahaa Hanad.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, qoysku wuxuu horey u soo maray dhacdooyin murugo leh, oo hooyada iyo aabaha labada wiil lagu dilay isla magaalada wax ka yar toban sano.
Somalia: Prime Minister Roble asks SNA to return to bases